Moe Kai: Have you smiled yet?
ကဲ ကိုယ့်အလှဲ.ရောက်ပြီ ဆိုပြီး လာခေါ်တော့ အသက် ၅၀ကျော် ဆရာကြီးပါ။ ချိန်းထားတဲ့ အချိန်ထက်လဲ နာရီဝက်လောက် နောက်ကျနေပြီး၊ သူ.ကိုကြည့်ရတာလဲ တခုခုကို အလွန် စိတ်မကျေနပ် စိတ်တို နေတဲ့ပုံစံနဲ. ပါ။ စကားလဲ သိပ်မပြော၊ ကျမတို. ဆေးရုံလာတဲ့ လူနာတွေကို မေးနေကျ မေးခွန်းတွေကို ခက်သွက်သွက် မေးပြီး စစမ်းဖို.လုပ်ပါတယ်။ တခါတလေ ပါးစပ်ကလဲ ဗြစ်တောက် ဗြစ်တောက်ပြော နေပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ကို ပြောတာလား၊ သူ.ဘာသာသူ ပြောနေတာလားလဲ မသိ။ ပြီးအပြင်ကို ထွက်သွားပြီး သူနာပြုတွေနဲ. လဲ ငြင်းခုန် နေလုိုက်သေးတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ “ငါများ တခုခု အမှားများလုပ်မိလား၊ ဒီဆရာကြီး ငါ့ကိုဘဲ စိတ်ဆိုးနေတာလား” လုို. မကြာခဏ ထင်မိတာပါဘဲ။
ဒီလိုနဲ. တခုပြီး တခု စမ်းသပ်လုို ပြီးသွားပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်အထိ ကျမ ဘာကြောင့် မျက်စိဆေးရုံရောက် နေရမှန်း မသိသေး။ ဘာကြောင့် ဆေးရုံကို လွှဲတယ်ဆိုတာလဲ ပြောမပြသေး။ သူက ကျမကို လှဲ.ပြောလိုက်တာက အားလုံးကောင်းတယ် ပြန်လုို.ရပြီတဲ့။ ဘာတွေကို စမ်းသပ်လုို. ဘာတွေ ကောင်းတာမှန်းလဲ မသိရ။ ဆေးရုံ သွားရခြင်း အကြောင်းကိုလဲ မသိရ။
ဒါနဲ. ကျမလဲ မနေနိုင်တော့ဘဲ ကျမကို မျက်မှန် စစ်ပေးတဲ့ Optician က ဘာကို စိတ်ပူတာလဲ၊ ဘာကြောင့် Refer လုပ်ရတာလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ ဆိုတာကို တရပ်စပ် အတင်းမေးတော့ တုိုတုိုတောင်းတောင်း စိတ်မရှည်တဲ့ အဖြေတချို.ကို ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ. အူကြောင်ကြောင်နဲ. ကျမလဲ ပြန်သာလာခဲ့ရပါတယ် ဘာကိုမှတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိခဲ့ရပါ။
အိမ်ရောက်လာတော့ ပြန်သုံးသပ် မိတာက အပြုံးတပွင့်ဟာ ဘယ်လောက် အဖိုးတန်တယ် ဆိုတာပါ။ လူတယောက် နဲ. တယောက် ဆက်ဆံ ကြတဲ့အခါ အပြုံးလေးနဲ. ဆက်ဆံလုိုက်တော့ ခံရတဲ့ သူအတွက်လဲ အလွန် ချိုမြိန်ပါတယ်။ အထူသဖြင့် ဆေးရုံလုိုနေရာမျိုးမှာ လူနာ အများစုက သူတို.ရဲ. ကျန်းမာရေးအတွက် အစစ အရာရာ ကောင်းမှကောင်းရဲ.လား။ ကုမရတဲ့ ရောဂါများ ဖြစ်နေမလား၊ ဆရာဝန်က သတင်းဆိုးများပြောမလား ဆိုပြီး စိတ်ပူနေကြတဲ့ သူတွေ မဟုတ်လား။ ဆေးရုံမှာ မှလဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်နေရာမှာ မဆို ချိုချိုသာသာ ပြောလိုက်တော့လဲ ဒီစကား၊ စိတ်တို စိတ်မရှည်သံနဲ. ပြောလုိုက်တော့လဲ ဒီစကားပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် သက်ရောက်ပုံချင်းကတော့ မတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ မြန်မာ စကားပုံမှာ နှုတ်ချို သျှိုတပါး လို.ဆိုထားတာပါ။ အဲဒီ အချိန်ကစပြီး ကျမ သင်ယူလုိုက်တာ တခုကတော့ တခါတလေ ကျမရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ပေါက်ကွဲလုလု နီးနီး ဖြစ်နေပါစေ၊ အပြုံးလေးတပွင့်ကို တော့ အမြဲ ပန်ထားနိုင်အောင် ကျမ ကျိုးစား နေထိုင်ပါတော့မယ် လုို.။